FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA JACK-A-BEE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Jack-A-Bee
Alika mifangaro Beagle / Jack Russell Terrier
'Ity i Elena (Ellie). Noraisina tao amin'ny Serivisy fikarakarana biby izy ary 2 herinandro taty aoriana dia nandao azy ny tompony teo aloha vao 2 volana monja. Hitako izy ary narahiko protokol nitondra azy tany amin'ny dokotera, nahita fa microchiped izy, nahita fa tsy tian'ny tompony izy ary tamin'izay no lasa mamanako mandrakizay. Tena marani-tsaina izy. Mpianatra haingana, mora be vilany SY fiaran-dalamby . Araka ny nolazain'ny tompona Jack-a-bee hafa rehetra, dia tsapako fa baolina volom-borona kely i Ellie ANGOVO . Mitohy isika mandeha isan'andro farafahakeliny 1 kilometatra, lava raha azo atao. Mofony daholo ny zava-drehetra. Mahagaga izy amin'ny mitaingina fiara. Nanapa-kevitra ny tsy hanome azy kilalao plush intsony aho satria esoriny ao anatin'ny adiny iray monja izany. Tiany ny an'i Kong's feno entana sy mangatsiaka. Aleony milalao toy izay misakafo ka manintona azy amin'ny sakafo na fitsaboana tsy mandeha foana. Manana zoky 5 izy saka ary toa mandeha tsara amin'ny ankamaroan'ny fotoana alika hafa amin'ny habe rehetra. Tiany ny olona ary sariaka be izy. Toy ny a ny hodiny Beagle . Izy dia lava, mahia ary matanjaka. Tsy haiko raha zavatra miteraka io fa afaka mitsambikina avo koa izy. Tiany ny mandeha an-tongotra mikitoantoana. Faly sy be fitiavana foana izy. 8 volana izy amin'ity sary ity. '
Ny alika Jack-A-Bee dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Beagle ary ny Jack Russell Terrier . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
DDKC = Mpamorona Alika Kennel Club
IDCR = Registera canine mpamorona iraisam-pirenena®
'Glasgow, a Jack-A-Bee dia mavitrika ary alika kely mahay mandanjalanja izay mianatra mora foana. Avy any Georgia, io famonjena io dia miaina any Florida ankehitriny, ary tsy tia afa tsy mandeha an-tongotra , ary fitsakoana amin'ny kilalao ankafiziny. Amin'ny valo volana amin'ity sary ity dia feno hery i Glasgow, saingy manomboka milamina kely hatramin'ny fahazazany kely. Somary mitandrina ihany izy manodidina ny olona, ​​ary mitandrina tsara amin'ny alika hafa, nefa manana saka alika marobe tiany hilalaovana. '
'Ity dia sarin'i Jack-A-Bee vaovao. 10 herinandro izy amin'ity sary ity. Nantsoinay hoe Chase izy, izay ataon'ny iray amintsika isaky ny mifoha izy. Ny reniny dia a Jack Russell ary ny rainy dia a Beagle . Mandeha izy iray kilaometatra ka hatramin'ny iray kilaometatra sy sasany an-tongotra isan'andro , raha mbola tsy avy ny orana. Ny olon-drehetra dia tia azy fotsiny ary hitanao ny antony. '
'Ity no alikako Jasper, hazo fijaliana Jack Russell / Beagle. 10 ½ volana izy amin'ity sary ity. Faly be izy nanana. Mora mampiofana izy ary tena mianatra. Tsy mbola nanana alika ara-tsosialy mihitsy aho. Tiany ny ankizy, ny alika hafa (amin'ny endrika sy habe rehetra) ary saka. Raha ny marina dia nanampy tamin'ny fitaizana zaza kamboty mihitsy aza izy. Jasper sy ilay saka saka Frankie no mpinamana be indrindra. Alika fonenana tsara izy ary mangina ary manana habe kely nefa tsy dia kely loatra, manodidina ny 22 lbs. Na dia rehefa mibontsina aza izy dia toa Beagle-y kely, fa tsy misy bay. Manana angovo kely tokoa izy fa milamina tsara ao an-trano. Bibikely mpiambina be izy ary te hiaraka aminao amin'ny fotoana rehetra. Afaka mitsambikina ity alika ity !!!! Heveriko fa toa toa Jack Jack Russell izy, mazàna dia satria voahidy ny rambony. Ny sofiny dia lava kokoa i Jack Russell fa tsy lava toy ny Beagle ary tendron'izy ireo amin'ny tendrony. Alika lehibe ao amin'ny vatan'ny alika kely io. '
'Ity dia Dewey, ilay fangaro kely Jack Russell / Beagle, hoy ny Dr. Dave. Efatra taona izy, ary nahazo azy avy tao amin'ny Fikambanan'olombelona eo an-toerana izahay. Sariaka amin'ny rehetra izy, ary tia mandeha lavitra, manenjika geckos ary mitsidika ny renibeny ao Cape Cod. '
Alika kely Jack-A-Bee amin'ny tapa-bolana— 'Izaho dia mpiompy Jack-A-Bee ary isaky ny misy olona mifanerasera amiko sy manontany raha te hahafantatra vaovao dia nozaraiko ny tranonkalanao. Nametaka ny sarin'ilay fako ACHC voalohany (sy farany) teraka tamin'ny reninay Beagle (Missy) sy Jack Russell dadanay (Bolin) izahay. Ireo mpihinam-bolantsika teo aloha dia naterak'i Jack-A-Bee reninay (Alley). Nahazo tatitra tsara foana aho momba ny fanadiovana trano sy ny fanofanana amin'ny ankapobeny. Marina fa tokony ho vonona amin'ny lafiny roa amin'ny spectra de personnalité ianao fa na dia afaka 8 herinandro aza dia afaka milaza be momba ny toetran'ny zaza. Rehefa mandinika hybrid iray, ireo olona nifandray tamin'ny alika kely nandritra ny herinandro voalohany teo amin'ny fiainany dia tokony hanana fahitana tsara momba ny lafiny itodihan'ilay zanak'alika. Voamariko fa ny toetra mampiavaka ny alika kely dia toa mampiavaka ny karazan'olona (fa tsy matetika, koa mitandrema). Na izany na tsy izany, izay mihevitra ny alika izay manana an'i Jack Russell ao amin'ny ra dia tokony ho vonona amin'ny alika mavitrika be matetika ary indraindray mitaky alika (sanatria izany). Ny valisoa dia mahatonga azy rehetra ho mendrika amin'ny fotoana maharitra, na izany aza! Mahay, milalao, be fitiavana ary mahafatifaty! Tsy hanova ny zanako ho an'izao tontolo izao aho. '
Scout the Jack-A-Bee amin'ny 12 herinandro (Beagle / Jack Russell Terrier mix dog)
'Jazz ity. Jack-A-Bee izy. Nahazo azy avy tamin'ny mpiompy iray izahay, izay teraka madio Beagles ary madio Jack Russells , ka 50-50 izy. Izy no alika tsara indrindra nananako. Matanjaka be miaraka amina toetra lehibe. Mahery vaika tokoa, raha ny tena izy, manohy ahy miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 15 mph mandritra ny 20 kilaometatra indray mandeha. Nihazakazaka azy 1600 kilaometatra lasa aho tamin'ny fahavaratra ary tiany izany. Izy koa dia mpilomano mafana fo, mpitrandraka lavaka, bitro ary mpanenjika biby kely ary be fitiavana amin'ny zanakay lahy izay mitovy taona aminy (1 ½). Hanoro hevitra azy ho an'izay manan-janaka kely aho ary miasa any ivelany. '
'Bruiser the Jack-A-Bee amin'ny faha-6 taonany - ny reniny dia Beagle (Jackie Brown) ary ny dadany Jack Russell (Simon), izay niandany tamin'ny Wishbone tao Nickelodeon! Tianay ny toetrany adala - ankafizo '
Hanna Jack-A-Bee 10 volana— 'Izy no alika mamy indrindra hatramin'izay. Angovo betsaka, fa housedog LEHIBE. Tsy hatakaloko vola madio mihitsy izy! '
Morris the Jack-A-Bee puppy (Jack Russell / Beagle mix dog) amin'ny telo volana— 'Manan-tsaina be izy, tia sekoly alika kely, efa saika toradrano tanteraka crate voaofana , mahay mipetraka, tonga rehefa voantso ary mandry. Tiany ny diany ary mitaingina fiara. '
Hijery ohatra hafa momba ny Jack-A-Bee
Sary Jack-A-Bee 1
Sary Jack-A-Bee 2
Lisitry ny alika mifangaro Beagle
saint bernard great dane mix
whippet lab mifangaro alika kely amidy
Laboratoara mainty 2 taona
sarin'ny mastitis amin'ny alika
Jack Russell miara Chihuahua